Dr Manangazira Vopa Mazano kuVanhu Vane Varwere veCovid-19 Mudzimba
Bazi rezvehutano rakazivisa neChitatu kuti vanhu gumi nevapfumbamwe vakafa nechirwere cheCovid-19, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru nezana nemakumi maviri nevaviri kana kuti 1,122.
Vanhu mazana matatu vakabatwa nechirwere ichi, izvo zvakasvitsa huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi pazviuru makumi matatu nezviviri nemazana matatu nevana , kana kuti 32, 304.
Vanhu vapora kubva kuchirwere ichi vava zviuru makumi maviri nezvitatu nemazana matanhatu ane makumu manomwe nevana kana kuti 23, 687, uye vachiri kurwara vava zviuru zvinonmwe nemazana mana nemakumi mapfumbamwe nevashanu, kana kuti 7, 495.
NeChipiri bazi rezvehutano rakati pavanhu zviuru zvinomwe nemazana mana nemakumi masere nemasere kana kuti 7, 488 vainge vachirwara nechirwere cheCovid-19, vanhu vainge vari muchipatara mazana maviri ane gumi nevatatu kana kuti 213 uye vari kurwarisa vari muIntensive Care Unit igumi nevaviri.
Mukuru anoona nezvekurwisa chirwere ichi munyika Dr Agness Mahomva vaudza Studio 7 kuti sezvo vanhu vakawanda vari kurwarara vari kudzimba zvinokurudzirwa kuti vagare mumupanda wavo vega.
Vatiwo vanenge vasingakwanise kusiya imwe imba yekuti ari kurwara agare oga vanokwanisa kutaura nebazi rezvehutano kana vamwe vakamirira nyaya dzechirwere ichi kana kuti Rapid Response Teams vanoenda kunoongorora pari kugara murwere nekuvheneka vamwe varipo kuti vane hutachiona here.
Kana zvaonekwa kuti hapana imba ingagara murwere ari oga, anoendeswa kunzvimbo dzinogara varwere kana kuti maIsolation Centres.
Mmukuru anoona nezvezvirwere zvekutapuriranwa mubazi rezvehutano Dr Portia Manangazira vaudza Studio 7 kuti zvakakosha kuti vanhu vari kuchengeta murwere weCovid-19 vagare vachigeza maoko avo uye mamask avanenge vapinda navo maanogara pamwe nekusashandisa midziyo mimwe chete naye.
Hurukuro naDr Portia Manangazira